Dagaalkii Sool-joogto oo istaagay iyo mellayshiyaadka deegaanka Buuhoodle oo guulo ka sheegtay. – Radio Daljir
Dagaalkii Sool-joogto oo istaagay iyo mellayshiyaadka deegaanka Buuhoodle oo guulo ka sheegtay.
Buuhoodle, Feb 08 ? Waxaa xaalad deganaansho oo aan cago badan ku taagnayn laga dareemayaan deegaanka Sool-joogto oo ka tirsan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn, halkaasi oo ay saaka kadhaceen dagaallo u dhaxeeyay ciidamada maamulka Soomaaliland iyo mellayshiyaad deegaanka Buuhoodle ah.
Warar aan haatan ka helnay jiidda hore ee u dagaalkaasi ka socdo ayaa tilmaamaya in xaaladdu ay haatan ka yara qabawdahay sidii saaka wax ku bilawdeen inkastoo ay wali socoto rasaas goos-goos ah oo ay labada dhinaca is-waydaarsanayaan.
Dagaalkaasi saaka ka bilawday deegaanka Sool-joogt oo qiyaastii illaa 25KM dhinaca waqooyiga uga beegan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa la tilmaamayaa in ay ka dhalatay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo labada dhinaca soo kala gaartay, inkastoo aan wali si rasmi ah loo caddayn karin inta ay gaarsiisan tahay.
Warar laga helay dadka deegaanka ayaa tilmaamaya magaalada Buuhoodle in la soo gaarsiiyey dad dhaawac ah oo aan tiradooda la hubin iyo saddex ruux oo dhimasho ah kuwaasi oo ku waxyeeloobay dagaalka maanta.
Saraakiil ka tirsan ciidamada deegaanka Buuhoodle oo aan la xiriirnay ayaa noo sheegay dagaalkaasi in ay guulo la taaban karo ka gaareen, ayna gacanta ku dhigeen tiro maxaabiis ah iyo gaadiid dagaal oo gaaraya illaa afar baabuur, kuwaasi oo qoryo kala duwan ay ku rakiban yihiin.
Saraakiishaas ciidan ee aannu la xiriirnay, waxay intaasi ku dareen in ay la wareegeen fariisimo ciidan oo ay horay u lahaayeen ciidamada maamulka Soomaaliland.
Ma jiraan warar laga helay dhinaca Soomaaliland ama dad ka madax-bannaan labada dhanaca oo xog-waramay sida wax u dhaceen, hase ahaatee waxaa la xaqiijinayaa dagaalka maanta in uu ahaa mid ka xooggan dagaalladii horay u dhacay lana filan karo khasaare badan in uu ka dhasho.
Waa markii saddexaad oo muddo bil gudaheed deegaankaasi uu ka dhaco dagaal u dhaxeeya Soomaaliland iyo dadka deegaanka Buuhoodle, waxaana inta badan dagaalladu ka curtaa weerar xagga ciidamada Soomaaliland ka yimaada.
Dagaal saaka ka bilowday deegaanka Sool-joogto ee gobolka Cayn.
Buhodle,Feb 8 -Dagaal xoogan oo la isku adeegsadanayo hubka noocyadooda kale duwan ayaa aroornimadii hore saaka ka bilowday deegaanka Sool-joogto oo qiyaas ahaan 25 km u jirta degmada Buuhoodle ee gobolka Cayn.
Dagaalka ayaa waxaa uu u dhaxeeyaa ciidamada maamulka Somaliland iyo dad deegaanka Buuhoodle,waxaana dagaalkan uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada maamulka Somaliland ay weeraro kusoo qaadeen fariisimaha ay ciidamada deegaanka Buuhoodle ku leeyihiin deegaanka Sool-joogto.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee uu dhaliyay dagaalkan oo ah mid wali socda,hase ahaatee wariyeyaasha Daljir ee ku sugan magaalada Buuhoodle ayaa soo sheegaya inay jiraan gaadiid dagaal oo ay ciidamada deegaanku ka qabsadeen ciidamada Somaliland oo lasoo gaarsiiyay magaalada Buuhoodle.
Magaalada Buuhoodle oo u dhow deegaanka uu dagaalka ka bilowday ayaa waxaa ku sugan masuuliyiin katirsan maamulka cusub ee Khaatumo state oo dhowaan looga dhawaaqay degnada Taleex ee gobolka Sool.